5PM: Yakazara-yakatarwa Project Management SaaS | Martech Zone
5PM: Yakazara-yakatarwa Project Management SaaS
Svondo, Kurume 23, 2008 Mugovera, October 25, 2014 Douglas Karr
Rimwe rematambudziko nekuva nechikwata chakabuditswa kunze kana chekumahombekombe chiri kungoedza kuteedzera nekuisa pamberi basa rako. Ini ndinoshanda ndisine isingasviki matatu zviwanikwa zvekunze, imwe yacho kumahombekombe. Zvinotaridza kuti paunopatsanura zuva rebasa pakati penzvimbo dzenguva, iwe unowanza kuunza kunonoka kune zvese zvaunoita.
Ndakawana muchina apo ini kukanzurwa Basecamp gore rapfuura. Zvinosemesa ndezvekuti, pandakasaina nebasa rangu idzva, ndakanga ndadzoka ndichishanda muBascamp zvakare. Ini handisi kugogodza Basecamp, chikumbiro chakakodzera. Ini ndinongoda chimwe chinhu chine basa rakasimba uye nekugadzirisa nguva. Ini ndakaita ipapo, uye ndiri kuwana ini ndichiri kuita izvozvi. Bhodhi rekukurukurirana rine yakapusa kuita runyorwa haingori kucheka seye chirongwa chekushandisa manejimendi.
Handizive kana Sergei Podbereschi naGreg Roy (vakavamba 5PM Project Management software) yakamboshandisa Basecamp, asi ivo chaizvo vakasangana nenyaya dzakafanana dzandinowana ndiri nhasi nekambani yavo, QG Software.
Saka - vakaisa misoro pamwe chete ndokukura 5PM. Iko kunyorera kwaishamisa, kwakagadzirwa pamakondinendi maviri akasiyana pamitauro mishanu dzakasiyana inotaurwa nevashandi (vaye) vatanhatu
Mushure mekuona kuratidzwa kwe5PM, ndakabata Sergei. Heano maitiro 5PM akauya nezve:
Yakagadziriswa seakawanda eayo mapurojekiti manejimendi mhinduro - kunze kwekushayiwa. Yakanga yadzoka muna 2003 patakatanga uye pakanga pasina chinhu kunze uko chataida. Saka takatanga zvedu ndokuidaidza Project & Team Manager. Muchokwadi, iyo yekutanga vhezheni yakatanga kugadzirwa neni, ipapo isu takahaya mamwe macode kuti tiwedzere. 5pm yakakura kubva pachigadzirwa chekutanga. Iyo yese web20, asi, sezvauri kuona, zvinoenderana nemazano ekare zvikuru. 5pm zvirokwazvo yaive redesign yakazara. Zvese zvinhu zvakachinja - kubva kune yekuvandudza chikuva uye interface kune yekumaka. Takazvivhura munaNovember 2007, se SaaS (vhezheni yapfuura yaikwanisa kurodha pasi).
Ini ndinofunga zvinotora kamwe kutarisa kuti uone kuti zvakasiyana sei. Isu hatina kucheka makona patakagadzira iyo interface. Isu taida zvese mukati mekubaya kana maviri uye mukana wekugadzirisa iwo maratidziro. Iyo inotouya neFlash Timeline (ini handizive yechero manejimendi manejimendi software inosanganisa AJAX uye Flash pamwe chete).
Isu tine nzira yakati siyanei kune inoenderana uye maficha - isu tinoedza kuita kuti ive nyore pamusoro apo tichirongedza yakawanda simba "pasi pehood". Zvakare, 5pm ndeye mhedzisiro yemusanganiswa unonakidza wezviono - Greg ndiye IT maneja ane makore gumi nemashanu ruzivo, ini ndiri mudiki webhu dhizaini uye musimudziri. Mamaneja senge akajeka maonero uye mishumo. Vagadziri vanovenga maturusi emapurojekiti ekushandisa. Saka takaedza kugadzira chinongedzo uko kuri nyore kuti nhengo dzechikwata dziwedzere mameseji kana kuvhara basa nekamwechete (kunyangwe kuburikidza neemail), nepo mamaneja aine simba rekuchera zvakadzika.
Ini zvakare ndinofunga kuti isu tinosiyanisa zvakanyanya apo isu tichiwedzera maficha, tichishandisa mhinduro kubva kune vatengi vedu. Tarisira shanduko hombe mune yedu Nguva uye Chikamu cheMishumo mumwedzi inotevera.
Ini ndakumbira vedu vekuvandudza vatambi kuongorora 5PM nekukasira. Chikwata ichi chaitarisa Jira, asi iyo interface iri kutendeseka kuvhiringidza heck kunze kwangu. Ndiri kutarisira kuti ini ndawana bara pakushandisa 5PM!
Yako Office Office buffs kunze uko, iwe unozokoshesa iyo demo. Zvakwana zvataurwa.
Tags: 5pmproject managementsaasyakapusa chirongwa manejimendisoftware semhinduro
Starbucks Kutanga Social Network
Mar 24, 2008 pa 1: 28 AM
Ini ndinoda iyo yakajeka uye inonzwisisika interface yakawanda. Ndiri kuyedza izvozvi (iyo 14 mazuva emahara kuyedzwa). Ngatione!
Mar 24, 2008 pa 2: 27 AM
Ini ndangoverenga yako posvo uye sezvo urikutsvaga yakanaka purojekiti manejimendi chishandiso ini ndinokukurudzira zvikuru kuti utarise pamusoro ProjectOffice.net. Iyo isu-yakavakirwa pm mhinduro iyo zvakare inopa yakanyatsonaka yakarongedzwa nguva uye mari yekushandisa, wikis uye nenyaya yekutevera.
Saka, edza uye undizivise ruzivo rwako.
Mar 24, 2008 pa 9: 49 AM
Chii, vari ivo 5PM vakomana vanobva kuIndiana?!? 😉
Kungotamba. Ini ndichangobva kutarisa 5PM uye, pamusoro, inotaridzika zvakanaka!
Mar 24, 2008 pa 10: 00 AM
Ha! Kwete - asi ivo vari pedyo… muOhio;).
Mushure mekutarisa iko kunyorera ndakanga ndakaputirwa uye ndaida kunyora nezvazvo. Kunyanya sezvo ini ndakanga ndisati ndazviona zvakanyorwa nezve chero kumwe kunowanikwa online. Kutsvaga kwemamwe mablog kwakakonzera pasina uye Sergei akaita 'chaiyo kubvunzurudzwa' neemail.
Nguva yacho yaive yakanaka zvakare - sezvo tiri kunetsekana neaya manejimendi nyaya kubasa kwangu izvozvi.